shaydaan oo ku jira injil Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: shaydaan oo ku jira injil
Ciise Masiix wuxuu sii sheegay calaamadaha ku soo noqoshada dhulka maalinta 4 ee usbuuca ugu dambeeya. Injil wuxuu markaa ka sheekeeyay sida ay culimadu u rabeen inay u qabtaan. Sheydaan (ama Ibliis) wuxuu tan u adeegsaday dariiq uu ku dilo nebiga – oo ah cadowgiisa la sheegayo. Waa tan sida ku qoran.
axaa soo dhowaatay Iiddii Kibistii-aan-khamiirka-lahayn oo la yidhaahdo Kormaridda.
Luukoos 22: 1-6
Waxaan aragnaa in Shaydaan uga faa’iideystay khilaafkan inuu ‘galo’ Yuudas si uu u khiyaaneeyo Masiixa. Tani ma aha inay naga yaabiso. Suuradda Faatiir (Suuradda 35 – Aasaasihii) iyo Suuradda Ya-Sin (Suuradda 36 – Ya Sin) ayaa Sheydaan ka sheegaysa:
Suuradda Fatir 35: 6
60 Miyaanan idinkula ballamin Bani aadamow inaydaan caabudin Dhaydaan, illen col muuqda yuu idiin yahay. 61 Ood ani i caabudaan, taasina waa wadada toosan. 62 Dhab ahaan wuxuu udhumiyay (Shaydaan) xaggiina dad badan, miyaydaan wax kasaynin.
(Suuradda Ya-sin 36: 60-62
Dhamaadka Injiil, Shayddaanka ayaa waxaa lagu sharaxay aragti ama muuqaal.
7 Markaasaa samada waxaa ka dhacay dagaal, oo Mikaa’iil iyo malaa’igihiisii waxay u soo baxeen inay la diriraan masduulaagii; oo masduulaagii iyo malaa’igihiisiina way la dirireen;
9 Oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa hoos baa loo soo tuuray, kaasoo la yidhaahdo Ibliis iyo Shayddaan, kii dunida oo dhan khiyaaneeyey. Waxaa isaga lagu soo tuuray dhulka, oo malaa’igihiisiina hoos baa loola soo tuuray isaga.
Muujintii 12: 7-9
Sidoo kale Shaydaanku waa cadow cadowgaaga ah, oo lagu matalay masduulaagga xooga badan oo xeelad ku filan ku hogaaminaya adduunka oo dhan. Cadawgan, sidii loogu sii sheegay Beerta uu Nabi Aadam la leeyahay, Wuxuu la wareegay Yuudas si uu u burburiyo Ciise Masiix . Sida ku qoran:
Mataayos 26: 16
Maalintii xigtay – Maalinta 6aad – waxay ahayd Iiddii Kormaridda ee Nebi Muuse oo bilaabay 1500 sano ka hor. Sidee Shaydaanku,ku heli karaay fursadiisa isagoo Yuudas u marayo, maalintan barakaysan? Waxaan ka eegeynaa tan soo socoto
.Soo Koobida Maalinta 5aad
Jadwalku wuxuu muujinayaa sida maalintii 5aad ee toddobaadkan,
Mas duulaagii weynaa, Shaydaanku, wuxuu u dhaqaaqay inuu ku dhufto cadowgiisa ugu weyn – Ciise Masiix.
Author [email protected]Posted on 21/11/2020 21/11/2020 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags cadowga shaydaanka, Ciise wuu khiyaameeyay, shaydaan oo ku jira injil, Yuudas wuxuu khayaamay Ciisa al MasihLeave a comment on Maalinta 5 – Shaydaan wuxuu u soo degay inuu duqeeyo masiixa